Usale nobukugqokile umndeni kusha indlu | News24
Usale nobukugqokile umndeni kusha indlu
Ukuqhuma kwesigubhu sikagesi kuyasolakala ukuthi yikho okuqubule umlilo oshise indlu yomndeni wakwaDlangisa isithombe: SITHUNYELWE
USALE nezimpahla obuzigqokile kuphela umndeni wase Azalea ngesikhathi kusha kungqongqa indlu oqashe kuyo ngoLwesihlanu olwedlule.
UMnu Mthandeni Dlangisa (35) obehlala kule ndlu kanye nomndeni wakhe uthe kushe yonke into okubalwa kuyo ngisho izimpahla zamalungu omndeni wakhe.
Lokhu kwenzeke ngezikhathi zasemini nokulapho uDlangisa aziswa khona ngokuqubuka komlilo.
Elandisa iphephandaba i-Echo uthe akazi ukuthi ngabe yini imbangela yokuthungeleka komlilo. Uthe okuvelayo komakhelwane nababekhona, ababona kuqubuka umlilo kusolakala ukuthi edalwa ukusha kwesigubhu sikagesi eseqhumile.
“Ukuqhuma kwesigubhu sikagesi kusolakala ukuthi yikho okuqubule lo mlilo oshisa indlu,” kuqhuba yena.
Uthe ukuthola kwakhe ngalokhu washayelwa ucingo watshelwa ukuthi kumele aphuthume njengoba ayelapho ebambe khona itoho.
“Ngathuka kakhulu ngoba kwakuyinto engangingayilindele ngesikhathi ngithola ucingo mayelana nesehlakalo. Okwafika emqondweni wami ngazibuza ukutho ngabe ikhona yini into engazange ishe.Ngafikelwa imicabango yezimpahla zami ngoba ngangazi ukuthi umndeni wami awukho ngaleso sikhathi. Kushe yonke impahla ebikhona endlini kumanje akukho lutho. Kwasha imibhede emibili, omabonakude ababili kanye ne computer yami engisiza kakhulu nayo yasha yangqongqa,’ kuqhuba uDlangisa.
Elinganisa inani lezimpahla zakhe ezishile liyafika ku-R50 000. Uthe nazo zikhona ngoba ubezama, apatanise azithenge ngemali ayithola ngokubamba amatoho ezingadini zabantu.
“Ngiyafisa ukuthola usizo kunoma ubani ongaba nozwelo. Kushe ngisho izimpahla zokugqoka, kuyimanje sisele nezimpahla esizigqokile kuphela. Uma kungakhona ongasisiza asixhase nanoma ngaluphi usizo singakuthokozela lokho. Nokuba siyadla kungenxa womngani wami okunguyena osipha ukudla ukuze sikwazi ukulala sidllile. Asikhethile mayelana nosizo siyokwamukela noma iluphi usizo esingaluthola kubantu,” ezikhalela.
UDlangisa ubuye wathi uyabonga ngoba akekho umuntu olimele kulesi sigameko. “Akekho owayekhona endlini nokwadala ukuthi kungabi namuntu owalimala,” kusho uDlangisa. Ofisa ukusiza uDlangisa angamshayela ku-078 608 3719